Umqhubi we-Srixon Z 355 usebenzisa i-shaft-shaft point shaft kwaye anikezela ubunzima obuninzi kwibhola ekwenzeni abadlali begolfu bafuna ukukhangela ibhola ngokukhawuleza.
Intloko yomqhubi we-Low spin.
Iimpawu ezihle, ezicocekileyo.
I-swingweight enobukhulu kunokuthi ithathe isetyenziswe.
Iipospoyinti malunga neCrixon Z 355 Umqhubi
Lo mqhubi usebenzisa oko i-Srixon ibiza ngokuba yi- "Mass Mass" teknoloji - i- clubhead enzima kakhulu ene-shaft-point point point. (Indlela efanayo kunye ne-putters enzima ekuncediseni i-golfer ukuzinzisa ukuguquka.)
Ininzi yentloko kunye nenqanaba elide lokulinganisela elenzelwe ukunikela amandla amaninzi kunye nesantya esiphezulu sebhola.
Inkqubo yokulungiswa kwe-QTS inikeza inhlanganisela e-12 ehlukeneyo ye- loft , indawo yokulala kunye nokujonga ubuso .
I-MSRP ngexesha lokuqaliswa ngo-2015: i-$ 349.99.
Izixhobo ezikhoyo: 9.5, 10.5 no-12 degrees kwi-RH; 10.5 no-12 degrees kwi-LH.
I-shaft yeStock i-Miyazaki Jinsoku.
Imodeli yabasetyhini iza ne-shaft ye-light and lofts ye-12 ne-15 degrees.
Ukuphonononga iSrixon Z 355 Umqhubi
I-Srixon iyinqobo yaseJapane eselula ixesha elide linalo iiglasi ezigubungelayo ukubiza igama layo lomenzi-mveliso (yenza "S" isandi kwaye wongeze iRICKS-on). Nangona abadlali begalufa bedlala kwaye bephumelela ngemveliso, iSrixon isabelana nokuthengisa kwimali kwi-US Kodwa umqhubi we-Z 355 wenkampani, owaziswa phakathi nango-2015, unokubonelela nge-sledgehammer emnene kwinkampani ngokuqaliswa kwe-Action Mass Technology. Ingundoqo ye-AMT inyuke ubunzima besisindo kunye ne-lightweight, i-ultra-high-balance-point shaft.
I-450 cc ekhangeleke kakuhle kwi-Z 355 igcina i-sauce eyimfihlo efihliweyo kakuhle. I-Srixon (uphawu loodade lwaseCleveland Golf - zombini luphethwe yiJapan-based SRI Dunlop Sports Co. Ltd.) lusebenzisa i-Miyazaki ultralight shafts ixesha elide. Umzila we-Jinsoku weehakhini ezinikezwa ngumqhubi weZ 355 zizonke i-sub-60 grams kwaye zibonisa i- torque ephezulu.
Oku kuvumela ukukhawuleza ngokukhawuleza ukuva ngokuvakalelwa ngakumbi.
I-clubhead yomqhubi we-Z 355 iye yaphakanyiswa ukuya kuma-211 amagremu-isakhanyiswa yimigangatho yesikolweni esidala, kodwa ukulinganisa okwenza umphumo we-sledgehammer ukuthwala namhlanje. Ngelixa i-swingweight (ukuvakalelwa kwintloko kuyo yonke iklabhu) ngu-D8-ngokumalunga nabaqhubi abaninzi kwi-D2-D3 udidi-lukhululekile emva kokufudumala kwangaphambili. Ngama-intshi ama-45 ubude, ubude bokudlala buyinto engokoqobo, ngokunjalo.
Abadlali beGolati ngoku basebenzisa izicwangciso zentloko eguqukileyo. Umqhubi we-Srixon Z 355 unikeza inhlanganisela e-12 eyahlukeneyo ye-loft, yamanga kunye ne-angle angle.
Ulwa njani? Ndandithanda ngokukhawuleza isandi seSrixon Z 355. Ngokwahlukileyo kubaqhubi abaninzi kwimarike, ubuso beNdebe ye-Titanium ye-6-4 bunikela ngokukholisa, okuqinileyo. I- angle yokusekwa yayikuphakamileyo, ehambelana nolunye udidi lwegalufa iSrixon izama ukufikelela. I-spin rate kwi-Monitor ye-GC yokubeka iliso yayisoloko isetyenziswa kwibala elingaphantsi kwe-2000, elithetha idide ezongezelelweyo ze-roll. Umgama wonke wawunokuqhathaniswa ngokulula okanye ngaphezulu kunabaninzi abaqhubayo ngoku.
Yintoni ongayithandiyo? Ngeendlela ezininzi, akukho nto. Kodwa ngamanye amaxesha andifuni ukwazi ukuba i-soseji yenziwa njani. Emva kokuba ndazi ukuba ubunzima bekhanda babuyi-211 amagremu, ndaqhubeka ndifuna ukubetha i-Z 355 nzima - njengokuba ndiyazi ukuba ndiyiguqula i-10-pound sledgehammer kune-5-pounder.
Kodwa, kwiindawo ezininzi zegalufa, ubuhle kukuba i-average swing ngesivinini kunye ne-Z 355 iya kuvelisa ixesha elide kwaye, ngokubaluleke ngakumbi, iziphumo ezingaguqukiyo. Kwaye, ngokuqinisekileyo, ndakwazi ukuphazamisa umqhubi weSrixon kwaye ndiphinde ndiphinde ndiphinde ndilawule.
Ngaphantsi : Uya kuvuyiswa kakhulu kunye nokuqhuba ngokukhawuleza nangokukodwa komqhubi we-Srixon Z 355.
Thenga i-Amazon kumqhubi we-Srixon Z 355
I-Cobra King LTD Ukuphononongwa kwabaqhubi: Ukwandisa i-Our-Have List List
Indlela yokuthabatha iKick Curling Free kick
Ingoma yokugqibela kaJohn Lennon
Iziganeko ezinkulu ezikhokelela kwiNguqulelo yaseMerika
Inkcazo yeClassical in Literature
Ingxoxo yesiTshayina yesiTshayina yabaQaleli